November 2020 - Online Hartha
ဒီည အားလား…ကမြ ဒီနေ့ စိတျတှေ လှတျပလိုကျတော့မယျ
November 30, 2020 by Online Hartha
သေးထွက်အောင် ရီရမယ့် ဟာသ (၃) ပုဒ်… ဒီည အားလား ? သူမ သည် ခေတ်ဆန်၏။ချော၏။လှ၏။ကိတ်၏။ ပုရိသ များအား ဖမ်းစားနိုင်သူဟု ဆိုနိုင်၏။ သူမ သည် ကျနော့် အိမ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်တွင် တစ်ကိုယ်တည်းနေသော အပျိုချော ဖြစ်၏။ တစ်နေ့ ညနေခင်းတွင် ကျနော် အိမ်ရှေ့ထိုင်ခုံ၌ ထိုင်နေတုန်း သူမ အိမ်ပြန်လာတာကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ငေးကြည့်နေစဉ် ထူးထူးခြားခြား ကျနော် ထိုင်နေရာဆီကို တန်းတန်းမက်မက် လျှောက်လာနေတော့ ကျနော် အံ့သြနေရင်း… အနားရောက်တော့ သူမ က နူးညံတဲ့ အပြုံးတပွင့် ဖြင့် ကျနော့်ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ကျနော်လည်း ပျာပျာသလဲနှင့် မက်တပ် ရပ်လိုက်၍ သွားဖြီးကာ ပြန် နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ သူမက … Read more
အပျိုလေးတွေမသိသေးတဲ့ မင်္ဂလာဦးည မျက်ကွင်းတွေညိုပြီး သတိပါလစ်သွားခဲ့ရသော သတို့သမီး မင်္ဂလာဦးည (၃)ဦးအကြောင်း
အပျိုလေးတွေမသိသေးတဲ့ မင်္ဂလာဦးည မျက်ကွင်းတွေညိုပြီး သတိပါလစ်သွားခဲ့ရသော သတို့သမီး မင်္ဂလာဦးည (၃)ဦးအကြောင်း အပျိုလေးတွေမသိပါဘူး ပူပူနွေးနွေး မင်္ဂလာဆောင် ပြီးကာစ ကောင်မလေးကို သူ့သူငယ်ချင်း အပျိုမ တစ်သိုက်က တိုးတိုးတိတ်တိတ်မေးသည်။ “ဟဲ့… နင့်မှာ မျက်တွင်းတွေကိုကျလို့ တစ်ညလုံးမအိပ်ဘူးလား??? မင်္ဂလာဦးည အတွေ့အကြုံလေး ငါတို့သိရအောင်ပြောပြပါလား?” “တော်ပါပြီဟာ မပြောချင်ပါဘူး” “ပြောပါဟာ နင်ကလည်း ငါတို့တွေဗဟုသုတရတာပေါ့” “အို… ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောရမှာ ရှက်စရာကြီး” “ပြောပါဟာ နင်ကလည်း… အချင်းချင်းတွေပဲဟာ” “ဒီလောက်တောင်သိချင်နေကြလည်း ပြောပြမယ်ဟာ။ မနေ့ညက တစ်ညလုံးမအိပ်ရဘူးဟ” “ဟင်… ဒီလောက်တောင်လား!!!” “အေးလေ… လက်ဖွဲ့တွေဝေစုခွဲကြရင်း လင်မယားနှစ်ယောက် ရန်သတ်နေကြတာ မိုးလင်းပေါက်ပဲဟေ့…” Unicode Version အပြိုလေးတှမေသိပါဘူး ပူပူနှေးနှေး မင်ျဂလာဆောငျ ပွီးကာစ ကောငျမလေးကို သူ့သူငယျခငျြး အပြိုမ တဈသိုကျက … Read more
ကောင်မလေးကလည်း အကြိမ်​ကြိမ်​ငြင်းဆိုနေတာပေါ့ ! ”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယ်” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း … နွားအို မြက်နုကြိုက်တာ အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်၍ လက်ထပ်ခွင့်တောင်း​နေပြန်​တယ်​ ! ကောင်မလေးကလည်း “ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ်…မီးက တကယ် ခလေးရှိပါသေးတယ်”ဆိုပြီး… အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေ​တော့…ဘောစိဦးလေးကြီးလည်း … “မီးလေးရေ …ရှေ့ရေးစဉ်းစားလေ” ..ဆိုပြီး အမြဲ နားပူနားစာလုပ်​​နေတယ်​ ! နောက်ဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း ဘောစိဦးလေးကို…. မငြင်းသာ မလှုပ်သာပဲ လက်ထပ်ဖို့သဘောတူ လိုက်​တယ် ! ကောင်မလေးက..ဦးနဲ့လက်ထပ်ပြီး…. ရွာကို ခဏ ဆိုပြီးပြန်သွားတာပေါ့ ! ဦးလည်း လွမ်းကာကျန်ရစ်ခဲ့တယ်​ ! နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ ကောင်မလေး ဦးဆီကို ပြန်​ရောက်​လာတယ် ! ကောင်မလေး(ခေါ် )မီးရဲ့ … Read more
ခှေး ကို လူအစားကြှေးလိုကျရတဲ့ ထိတျလနျ့ဖှယျ လူစားတဲ့ ဘီလူးမတံတား (ဖွဈရပျမှနျ)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြို့က “ဘီးလူးမတံတား”အကြောင်းလေးပါ.။ ဘီလူးမတံတား ဆိုတာက တံတားအတိုလေးပါ ပဲ..။ဒါပဲမဲ့ ဘီးလူးမတံတား ဆိုတဲနာမည်အတိုင်း လူစားပါတယ်..။ တစ်နှစ်မှာလူနှစ်ယောက်ကအနည်းဆုံးကားတိုက်ပြီးသေကြတယ်။တံတားက ၄လမ်းသွားပါ။ ဒါပဲမဲ့ ရန်ကုန်လိုအသွားတစ်ဖက်၊အပြန်တစ်ဖက်မဟုတ်ဘူး..၊ကြိုက်သလိုသွားလိုရတယ် မခွဲထားဘူးပေါ့။ ကားတိုက်မှု ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် ညရောက်ရင် တံတားဖက်ကအသံနက်ကြီး နဲ့ “ဟေး…..ဟေး….. ”ဆိုပြီးဝမ်းသာသံလိုတစ်ခါ တစ်ခါ…“ဟီးးးးးးးးးးးး…….အီးးးးးးးးးးးးး…အားးးးး” ဆိုပြီးညည်းသံလိုလို တစ်မျိုး အော်သံတွေကြားရတယ်။တံတားဖက်ကအော်သံတွေကြားရရင် မကြာဘူး လူသေတာပဲ။ကားတိုက်မှု့တစ်ခုဖြစ်တော့ အထူးအဆန်းကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ ကားမောင်းသမား က ပြောပြတယ်…။ သူကားရှေ့မှအရမ်းလှ၊ ဆံပင် အရှည်နဲ့ အစိမ်းရောင်အ၀တ်ဝတ်ထားတဲ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရပ်နေလို့ သူရှောင်လိုက်တာ ပလမ်ဖောင်းပေါ်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကိုကားတိုက်မိသွားတယ်တဲ့…။ အဲ့ ကောင်မလေးကို မတိုက်ချင်လို့ ရှောင်ရင်း မှောက်သွားတာပါတဲ့…။ကားတိုက်ခံရရင်လည်း သေတဲ့လူများတယ်၊ရှင်တဲ့လူမရှိသလောက်ပဲ။ ခဏခဏအဲသလိုဖြစ်နေတော့ ရပ်ကွက် ကစုပြီး (၇) ရက်ပတ်လုံးလုံး တရားနား၊ပရိတ်ရွတ်တယ်။ ပြီးတော့ ဘုန်ကြီးတွေအလှည်ကျနေ့နေ့ညည တံတားပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးပရိတ်ရွတ်ကြတယ်။ နောက်ပြီး … Read more
အံ့သွလှနျးလို့ ပါးစပျအဟောငျးသား ဖွဈသှားနိုငျတယျ…
ကမ္ဘာပေါ်တွင် သူခိုးမရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပင်။ ထိုစကားကို ပြောခဲ့သူမှာ အိန္ဒိ ယနိုင်ငံသား ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီပင် ဖြစ်သည်။ အီဂတ်ပူရီပြည်နယ်၌ ဗုဒ္ဓ ၏ ၀ိပဿနာ တရားတော် များ ကို ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသော ဂုရုကြီးဦးဂိုအင်ကာ၏ အဘိုးတော်သူပင် ဖြစ်သည်။ အရောင်းအ၀ယ် ကုန်သည် အလုပ်ဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ ခြေဆန့်ခဲ့ဖူးသော ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီသည် သူ အမြတ်နိုးဆုံးဖြစ်သော မန္တလေးရတနာပုံ နေပြည့်တော်တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုချိန်က အထက် မြန်မာပြည်သည် မြန်မာဘုရင် ၏ လက် ထဲမှာသာ ရှိသေး သောကြောင့် သူခိုး လူလိမ်ဆိုသည်မှာ ချိုနှင့်လားဟု မေးရလောက်အောင် မြန်မာတိုင်း စာရိတ္တသတ္တိ အပြည့်ရှိနေချိန် … Read more
ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ သတိပြု: ဒီပစ္စည်းနဲ့ ကြိုက်တဲ့ကားကို သော့မလိုပဲဖွင့်နိုင်ပြီ (ရုပ်/သံ)
၁၁၉ ဒေါ်လာ (ကျပ် ၂ သိန်းဝန်းကျင်) တန် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတစ်ခုက ခလုပ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ကြိုက်တဲ့ ကားတွေကို မူရင်းသော့မရှိပါပဲနဲ့ အဝေးထိန်းစနစ် ရီမုတ်နဲ့ ဖွင့်နိုင် ပိတ်နိုင်ကြောင်း ပြသတဲ့ ဗီဒီယိုက WhatsApp ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ (စိုးရိမ်စရာပဲနော်) ရုပ်သံအရ LCD display ပါဝင်တဲ့ ဒီပစ္စည်းရဲ့ အပေါ်ဘက်မှာ ခလုတ်လေး ၆ ခုပါရှိပါတယ်။ ဒီခလုပ်လေးတွေကို တစ်ခုခြင်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် နှိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အနီးမှာရှိတဲ့ ကားတစ်စီးရဲ့ တံခါးကို သော့ပွင့်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ တစ်ခါပြန်ပြီး ခြေရာလက်ရာမပျက် သော့ပြန်ပိတ်နိုင်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုပါဦး။ ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မတော်တဆ ကားထဲမှာ သော့ကျန်ခဲ့ပြီး Lock ချမိသူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် … Read more
ကျွန်မ ဒါတွေဂရုမစိုက်ဘူး ရှင့်စိတ်ကိုပဲ ကျွန်မသိချင်တယ်။ ရှင် ကျွန်မကိုကြိုက်လား..?
“ကျွန်မ ရှင့်ကိုကြိုက်တယ်””ငါမှာမိန်းမရှိတယ်လေ” ယောကျာ်းက လက်မှာဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကို ပွတ်သပ်ရင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ “ကျွန်မ ဒါတွေဂရုမစိုက်ဘူး။ ရှင့်စိတ်ကိုပဲကျွန်မသိချင်တယ်။ ရှင် ကျွန်မကိုကြိုက်လား” ဒီအဖြေကို ကြိုတွေးမိကြမှာပါ။ ယောကျာ်းက ခေါင်းမော့ပြီးကောင်မလေးကိုသေ ချာကြည့်လိုက်တယ်။ မိန်းကလေးက အသက် (၂၄)နှစ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုတယ်။ အရွယ်ကောင်းတဲ့အသက်အရွယ်ပါ။ အသားအရေဖြူစွတ်တယ်။ ဖျတ်လတ်သန်စွမ်းတယ်။ အရောင်တောက်ပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်ဝန်းတစုံ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ “တကယ်လို့ ရှင်လည်းကျွန်မက သဘောကျတယ်ဆိုရင် ကျွန်မရှင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ချင်တယ်” စိတ်မရှည်တဲ့အဆုံးမှာကောင်မလေးက ဒီစကားကို ထပ်ပြောလိုက်တယ်။ “ငါ့မိန်းမကိုငါချစ်တယ်” ယောကျာ်းက ပြတ်ပြတ်သားသားဖြေလိုက်တယ်။ “ရှင် သူ့ ကိုချစ်တယ်? သူ့ ကိုဘယ်လိုချစ်တာလဲ? အခုလက်ရှိ သူ့အသက်အရွယ်က အိုနေပြီ အရင်လိုကြည့်မကောင်းတော့ဘူးမလား? အဲဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီက ပါတီပွဲကို ရှင်တခါမှ မခေါ်လာရဲတာမလား ••••” ကောင်မလေးက ဆက်ပြောသွားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်းရဲ … Read more
Categories အိမ်ထောင်ရေး Leaveacomment
ရိုးမွကေအြောငျ ပေါငျးဖကျသှားရမယျ့ ခဈြသူနှဈဦးကွားက ဒီအပွုအမှု့မြား
ချစ်သူဖြစ်နေစေဦးတော့။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆင်မပြေ၊ ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်ရတာ၊ ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုကိစ္စတွေ ခဏခဏ ဖြေရှင်းရတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်အချစ်ရေးကို စိတ်ကုန်လာမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ သင့်အချစ်ရေးအတွက် သင်ဟာ သူ့ကိုသာ အဆုံးထိ လက်တွဲဖို့တောင် သေချာနေပြီဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချက်ကလေးတွေကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၁။ နှစ်ဦးသားအကြိုက်တူတာလေးတွေ ဝေမျှတတ်ကြတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အားကစား၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းအမျိုးအစား၊ ကိုယ်ဖတ်တဲ့စာအုပ်မျိုးစတာတွေကို သူနဲ့အတူ အမြဲဝေမျှတတ်တယ်။ သူ့အကြိုက်ကိုလည်း ကိုယ်ကအလေးထားတတ်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာရေရှည်သွားမယ့်အတွဲတွေရဲ့ ပုံစံပါပဲ။ ၂။ သူကြိုက်တာတွေ ကိုယ်လိုက်မကြိုက်နိုင်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာ သူမကြိုက်လို့ သူကရော၊ သင်ကပါ စိတ်ဆိုးတာမျိုးတွေ မရှိဘူး။ ပြသနာမဖြစ်ဘူး။ လက်ခံနားလည်ပေးတတ်တာမျိုးကလည်း နှစ်ဦးသားမြဲစေမယ့် အချက်ပါပဲ။ ၃။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဖူးတဲ့ သင့်လျှို့ဝှက်ချက်တွေ သူ့ကိုပြောပြတတ်တယ်။ အရင်တုန်းက ထားခဲ့၊ … Read more
သငျ့ လကျဖဝါး နှဈဖကျကို ဒီလိုထောငျကွညျ့ရငျ ဘယျနံပါတျနဲ့ တူလဲ ကွှားခဲ့နျော…
November 29, 2020 by Online Hartha
လူတစ်ယောက်ရဲ့လက် များက သင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်း ကဲ့သို့သောအရာတွေ အကြောင်း ကို တစ်စုံတစ်ခု ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူတို့သည် သူတို့ပိုင်ရှင်တွေထက် မှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက် ကို ပိုပြီး ပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး အကြောင်းကို ပြောနေတဲ့ သင့် လက်ဖ၀ါး ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာ မှန်/မမှန် ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ၁။ ဘယ်ဘက် လက် ရဲ့ လမ်းကြောင်း က ပိုမြင့်မားခြင်း ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် သည် လေးနက်တဲ့ အချစ်ရေးမျိုးရရှိဖို့ အလျင်စလိုလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ရွင်မှု အတွက် သူတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းမှာ သူတို့သည် အချစ်ရေး ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့နောက်ဆုံးမှာ ဘ၀အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ သူတို့ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် … Read more
သားဦးစနေ မီးလိုမှဆေိုတာ ယုံတမျးစကားလား ? တကယျလား..?
သားဦးစနေ မီးလိုမွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား ? တကယ်လား..? သားဦးစနေမွေးရင်ထိတ်လန့်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်စနေသားသမီးဟာဒုတိယဘုန်းကံအကြီးဆုံးစနေသားဦးမွေးလို့ ဓါးထမ်းကျော်တဲ့မိဘတွေ စောစောသေကုန်ကြလေရဲ့စနေနေ့မရှိခဲ့ရင် ရတနာ၃ပါးလည်းလောကမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးစနေနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီးရတနာ ၃ ပါးစုံတဲ့ရတနာအခါတော်နေ့ပဲစနေနေ့ဟာတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မစက်စတည်တဲ့နေစနေနေဟာ သိပ်မွန်မြတ်တဲ့နေ့ဘုရားရတနာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စပေါ်သည်တရားရတနာနဲ့သံဃာရတနာကတော့စနေနေ့မှာစပေါ်တာ ဘုရားမွေးနေ့ သောကြာနေ့က အမြတ်ဆုံး ၆၄၇ရတာနာ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တရားနဲ့သံဃာက စနေနေ့စပေါ်ရပါတယ် ရတနာသုံးပါးပေါ်တဲ့နေ့တွေဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာကိုကောက်လည်း ၄၇၇ပဲနော်စနေနေ့မရှိပဲတရားလည်းမရှိ နိုင် သံဃာရတနာလည်းမရှိနိုင် တရားနဲ့သံဃာမှ မရှိရင် ဘုရားပွင့်ခဲ့ကြောင်းလည်းမသိနိုင် ရတနာ၃ပါး နဲ့သာသနာကြီး ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာဒါကိုသားဦးစနေမီးလိုမွှေဆိုပြီး ပေါက်ကရပြောသူက ရှိခဲ့တယ် ရဟန်းတော်တွေအားလုံးဟာဘုရားရဲ့ ဘာတွေလဲ သားတော်တွေ မဟုတ်ဘူးလား သားတွေထဲက ဦးဆုံးသားကို ဘာလို့ခေါ် သားဦး လို့ခေါ်တယ်နော်ပထမဦးဆုံး စနေနေ့မှာ ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော့ အရှင်ကောဏ္ဍည သောတာပန်တည်တယ် ဘုရားထံမှာ ရဟန်းပြု ခွင့်တောင်းတယ် သံဃာရတနာ … Read more